Matanho gumi Ekugadzira Inobudirira Ongororo dzepamhepo | Martech Zone
Matanho gumi Ekugadzira Inobudirira Ongororo dzepamhepo
Chipiri, Gunyana 27, 2011 China, Gunyana 19, 2013
Zvishandiso zvekutsvaga pamhepo senge Zoomerang inonakidza yekubudirira uye neunyanzvi kuunganidza uye kuongorora data. Tsime rakaiswa pamwechete online ongororo rinokupa iwe inoitika, yakajeka ruzivo kune ako bhizinesi sarudzo. Kupedza nguva yakatarwa kumberi uye kuvaka yakakura online ongororo kuchakubatsira iwe kuwana yakakwira mhinduro mitengo, yepamusoro mhando data uye zvichave nyore kwazvo kune vako vakapindura kuti vapedze.
Aya matanho gumi ekukubatsira gadzira zvinobudirira ongororo, wedzera mwero wekupindura wekutsvaga kwako, uye kunatsiridza huwandu hwese hwe data raunounganidza.
Tsanangura zvakajeka chinangwa cheongororo yako - Ongororo dzakanaka dzakanangana nezvinangwa zvinonzwisisika. Tora nguva kumberi kuti uone zvinangwa zvako. Kufanogadzirira kuronga kunobatsira kuona kuti ongororo inobvunza mibvunzo chaiyo kusangana nechinangwa uye kugadzira data rinobatsira.
Chengetedza ongororo ipfupi uye yakatarisa - Pfupi uye yakatarisa inobatsira nezvose zviri zviviri uye huwandu hwemhinduro. Zvinowanzova zvirinani kutarisa pachinangwa chimwe chete pane kuyedza kugadzira ongororo yepamusoro inovhara zvinangwa zvakawanda. Zoomerang research (pamwe naGallop nevamwe) yakaratidza kuti ongororo inofanira kutora maminetsi mashanu kana mashoma kuti apedze. 5 - 6 maminetsi anogamuchirwa asi isu tinoona akakosha ekusiya mareti anoitika mushure memaminitsi gumi nerimwe.
Chengeta mibvunzo iri nyore - Ita shuwa kuti mibvunzo yako inosvika padanho uye udzivise kushandiswa kwejagoni, slang kana mazita.
Shandisa mibvunzo yakavharwa yakapera pese pazvinogoneka - Yakavharwa yakapera mibvunzo yemibvunzo inopa vanopindura sarudzo dzakasarudzika (semuenzaniso Hongu kana Kwete), zvichiita kuti zvive nyore kuongorora mhedzisiro. Mibvunzo yakavharwa yakapera inogona kutora fomu yes / kwete, yakawanda sarudzo kana chiyero cheyero
Chengeta chiyero chemibvunzo mizhinji inoenderana neongororo - Kuyera zviyero inzira huru yekuyera uye kuenzanisa seti yezvimwe. Kana iwe ukasarudza kushandisa zviyero zvechiyero (semuenzaniso kubva pa1 - 5) zvichengetedze zvinowirirana mukati meongororo. Shandisa iyo yakafanana nhamba yemapoinzi pachiyero uye uve nechokwadi chezvinoreva zvepamusoro uye zvepasi zvinogara zvakaenzana mukati meongororo. Zvakare, shandisa isinganzwisisike nhamba muyero yako yekuyera kuti kuongorora kwedatha kuve nyore.
Kurongeka kunoteedzera - Ita shuwa kuti yako ongororo inoyerera nenzira ine musoro. Tanga nesumo pfupi inokurudzira vanotora ongororo kuti vapedze kuongorora (semuenzaniso. "Tibatsire kuvandudza sevhisi yako kwauri. Ndokumbira upindure ongororo pfupi inotevera."). Tevere, izano rakanaka kutanga kubva kumibvunzo yakafara-wobva wobva waenda kune idzo dzakatetepa. Chekupedzisira, unganidza huwandu hwevanhu uye ubvunze chero mibvunzo inonetsa kumagumo (kunze kwekunge uri kushandisa ruzivo urwu kuongorora vatori vechikamu veongororo).
Pre-edza yako ongororo - Ita shuwa kuti iwe pre-kuyedza yako ongororo pamwe nenhengo shoma dzevateereri vako uye / kana vashandi pamwe navo kuti vawane glitches uye zvisingatarisirwe kududzirwa kwemibvunzo.
Funga nezve yako nguva yekutumira yekukoka kwekuongorora - Dzazvino nhamba dzinoratidza yakanyanya kuvhurika uye tinya kuburikidza nemitero inoitika Muvhuro, Chishanu neSvondo. Uye zvakare, tsvagiridzo yedu inoratidza kuti mhando yemhinduro dzeongororo haina kusiyana kubva pakati pevhiki kusvika pakupera kwevhiki.
Tumira ongororo yeemail yekuyeuchidza - Kunyangwe zvisina kukodzera kuongororwa kwese, kutumira zviyeuchidzo kune avo vasina kumbopindura kunogona kupa kukurudzira kwakanyanya mumitengo yemhinduro.
Funga kupa kurudziro- Zvichienderana nerudzi rweongororo uye kuongororwa kwevateereri, kupa zvinokurudzirwa kazhinji kunonyanya kushanda pakuvandudza mitengo yemhinduro. Vanhu vanofarira pfungwa yekuwana chimwe chinhu chenguva yavo. Zoomerang tsvagiridzo yakaratidza kuti zvinokurudzira kazhinji wedzera mhinduro dzemitengo ne50% paavhareji.
Wagadzirira kutanga? Sign up kune yemahara Zoomerang basic account, shandisa matanho ari pamusoro, tangisa yako ongororo uye gadzirira kuongorora ako mhedzisiro munguva chaiyo. Ramba wakatarisana nezvirikuuya kumberi uko kwandinozonyura mune mamwe epamberi ekuongorora maficha pamwe nehunyanzvi nzira dzekubatanidza online ongororo mune rako rese bhizinesi zano. Kufara Kuongorora!
Pari zvino uri kushandisa ongororo dzepamhepo zvebhizinesi rako? Wakawana here matipi aya achibatsira? Ndokumbirawo ubatanidze hurukuro iri muchikamu chemashoko pazasi.
Nov 26, 2014 at 6:22 AM